Ndị na -emepụta ngwaahịa - Ndị na -ebubata ngwaahịa China & ụlọ ọrụ
Omume griin haus emeputa nke China Waterproof kpaliri Steel ahaziri griin haus-PMV012
Nrụpụta Ọkachamara Maka China Venlo Ụdị Glass Glass na Hydroponics-PMV011
Venlo Multi-span Commercial Glass Greenhouse, Window mepere emepe na-ekpuchi PC Board-PMV010
Elu ụlọ ezé mepere emepe maka ọtụtụ ọrụ ugbo-PMS006
Griin haus-ezé nwere ụdị abụọ: Nnukwu ihie-akwa na obere ezé-ezé. Mana anyị na-ejikarị ihe ndị ọzọ bụ obere griin haus. Griin haus-ezé na-ewu ewu na mpaghara ọzara na mpaghara ihu igwe ebe okpomọkụ.
Griin haus-tooth griinc tumadi na-anabata ikuku ikuku n'akụkụ na elu, ikuku ikuku dị n'ime ụlọ ga-agwụ ngwa ngwa n'èzí, na-ebelata okpomọkụ na iru mmiri. Mmetụta ikuku ya sitere n'okike, ka mma karịa griin haus nke nwere ọtụtụ ihe. Yabụ na ọnọdụ okpomọkụ n'èzí kwa afọ bụ mpaghara dị elu, ọkachasị na-anaghị akwado usoro ikuku na-amanye ikuku, griin haus-griinụ bụ ihe owuwu griin haus kacha mma ịhọrọ.
Factory ere China Hot-mikpuo kpaliri-Nha nha Greenhouse-PMS005
Ebe ikuku na-adị mma nke ọma ka ọ na-amị mkpụrụ osisi griin haus ọtụtụ-PMS004
Ọ dị ọnụ ala ma dịkwa mfe ịwụnye griinụ ụdị dome-PTD005
Ụlọ ọrụ na-enye griin haus okooko osisi nke nwere okirikiri na sistemụ nhọrọ niile-PMG006
Ọnụ ego nkịtị China Venlo Type Glass Green House/Glasshouse maka Akwụkwọ nri/okooko osisi/kukumba/ụlọ ngosi/ubi na ugbo nwere iko mmiri/ezi nnyefe/okpokoro kpaliri-PMV009